टिएमएसमा समस्या आउँदा पनि ३ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री, नेप्से परिसूचक १५३७.२५ विन्दुमा
भदौ २८, काठमाडौं । आइतवार नेप्से परिसुचक १ हजार ५३७ दशमलव २५ विन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से १६ दशमलव ५६ अंक वृद्धि भएको हो । आइतवार १९१ कम्पनीको रू. ३ अर्ब ३७ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
आइतवार कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) मा समस्या आएपछि ११: २५ मा कारोबार रोकिएको थियो । २ : १५ देखि पुनः कारोबार सुचारु भई ५ : १५ सम्म कारोबार भएको हो । यसदिन सबैभन्दा बढी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर ९ दशमलव ९८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४५२ पुगेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य दोस्रो बजारमा कारोबार खुला भएकै दिनदेखि ९ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । दोश्रोमा क्रमश: एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९ दशमलव ९५ प्रतिशत, एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको ९ दशमलव ७७ प्रतिशत, राधी जलविद्युत् कम्पनीको ९ दशमलव ६३ प्रतिशत र अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
आइतवार सर्वाधिक कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ । कम्पनीको रू. २४ करोड २० लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । सर्वाधिक कारोबार गर्ने दोस्रो कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रहेको छ । आइतवार कारोबारमा आएका १९१ ओटा कम्पनीमध्ये ९९ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ । ५२ ओटाको घटेको छ भने १९ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।
सर्वाधिक कारोबार गर्ने चार कम्पनीहरु :
आइतवार नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ का शेयरधनीले धेरै गुमाएका छन् । यसदिन योजनाको शेयरमूल्य ९ दशमलव २७ प्रतिशत घटेको छ । दोश्रोमा दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव १७ प्रतिशत घटेको छ ।
कारोबारमा आएका १२ समूहका परिसूचकमध्ये व्यापार समूहको परिसूचक २ दशमलव ८३ प्रतिशत, वित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेको हो ।
यसदिन लगानीकर्ताहरु बीमा कम्पनीहरुको शेयतर्फ आकर्षित भएका छन् । सोही कारण सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको परिसुचक ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
युनाइटेड फाइनान्सको शेयरमूल्य दोस्रो दिन पनि १० % बढ्यो [२०७७ असोज, ६]
९.८० अंकले घटेको बजारमा शिखर इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, ६]